Su'aal MySQL ee jiidaya qaybaha WordPress | Martech Zone
MySQL Su'aal loogu talagalay jiidista qaybaha WordPress
Arbacada, Juun 6, 2007 Khamiista, Oktoobar 23, 2014 Douglas Karr
Dhawaan, waxay u muuqatay in qoraalladii aan wax ka qoray noloshayda gurigeyga ay u muuqdeen inay helayaan aragtiyo bog ka badan kuwa mowduucyadayda kale. Waxay taageeri laheyd in muuqaalka shaqsiyadeed ee bloggu yahay waxa soo jiita akhristayaal badan sidaa darteed waxaan doonayay inaan ogaado. Mid kasta oo ka mid ah qoraalladayda taabanaya noloshayda gaarka ah, waxaan ku darayaa weydiin gaar ah. Qeybaha intiisa kale waxaa lagu dabaqayaa waxyaabaha ku saleysan. Ujeedada waxaan u sameeyay si aan ugu dambeyntii warbixin uga bixiyo. Waqtigaasi waa yimid!
Ma ahan sida ugu fudud ee aad u maleyn karto inaad xisaabiso, in kastoo. Hawsha oo dhan waxay igu qaadatay dhowr saacadood oo xog ah inaan soo sheego! Caqabada ugu horreysay waxay ahayd inaan xogta ka soo saaro keydkeyga. Gudaha WordPress, waxay u baahan tahay weydiin wanaagsan oo ku biirista inta udhaxeysa seddex miis, fariimo, posts2cats, iyo qeybaha. Hadaad jeceshahay inaad tan sameyso, waa kan weydiinta:
Xulo 'post_date`,' cat_name` FROM 'wp_posts` BIIX KU BIIR `` wp_post2cat` ON' 'wp_posts`.ID = `wp_post2cat`.post_id BARNAAMIJ KU BIIR` `wp_categories` ON' wp_categories`.cat_ID =` wp_post2at
Ogsoonow inaad dhab ahaantii heli doonto wax ka badan hal rikoor dib boostada haddii aad ku xushay qaybo kala duwan oo ku yaal boostada. Taasi waa caadi, dhab ahaantii waxaan kula macaamilaa taas falanqeynteyda.
Google waxay ka dhigeysaa wax fudud inay soo jiidaan xogta taariikhda aad u baahan tahay una dhoofiso adigoo ah faylka CSV. Waxaan si fudud u jiiday taariikhda isku midka ah iyo tirada aragtida bogga. Ka dib waxaan ku milmay labada iloodba, qoraalada baloogyada iyo qaybaha iyo aragtida bogga la xidhiidha. Waxyaabo xiiso leh!
Tallaabada xigta waa tan xiisaha badan! Waxaa jira taxane ah weydiimo iyo talaabooyin ay tahay inaad soo marto (Ma doonayo inaan ku faahfaahiyo faahfaahinta intaa leeg halkan) laakiin soosaarka aasaasiga ahi wuxuu yahay waxaan rabaa inaan xisaabiyo tirada bogagyada ee loo qaybiyay tirada qoraallada qayb kasta. Ka dib waxaan xisaabiyey celceliska aragtida halkii boosteejo oo dhan oo aan isbarbar dhigo natiijooyinka.
Waxa aad hoosta ku aragtaa waa falanqeyn ku saabsan Index-ka Muuqaalka Bogagga ee Qeyb ahaan. Guji sawirka haddii aad jeclaan lahayd inaad ku aragto cabir buuxa. Tilmaanta 100 waa celceliska. Tilmaame 200 ayaa macnaheedu yahay in qaybta ay laba jeer ku dhufatay celceliska boostada. Tilmaanta 50 waa celcelis ahaan nus.
Ma ahan wixii aan filayay, laakiin waxaan u maleynayaa in qaar ka mid ahi macno samaynayaan. Dhinaca ugu hooseeya ee cabirka (midig), waxaan ku aragnaa mawduucyo dheregsan, miyaanay ahayn? Siyaasadda, Teknolojiyada, Ganacsiga, Blogging, iwm. Waxaan sidoo kale aragnaa mawduucyo aad iyo aad u xiiso badan sida Khariidadaha Google. Maaddaama aysan ahayn mowduuc aasaasi ah oo ku saabsan boggeyga internetka, waa shaki inaan soo jiito dareenka badan ee taas.
Homefront wuxuu ahaa mid udhiman-xarun! Waxaan u maleynayey inay ka sii sarreyso laakiin xaqiiqda ah inaysan hoos u dhigneyn waxay ii sheegaysaa inaysan sinaba u dhaawaceynin boggeyga. Ma caawineysaa? Waxaa laga yaabaa in haynta, laakiin aan toos u ahayn aragtida bogga.
Waxa runta u guuxaya waa meelaha qibrada u leh ee aan haysto. Falanqaynta… wow! Waxaan u maleynayaa inay tani tahay aag mowduuc ka qaylinaya oo caawimaad ah. Ma jiro web aad u tiro badan Analytics baloogyada halkaa ku yaal! Dadku waxay rabaan inay ogaadaan sida loo isticmaalo Analytics, sida loo dhaqan geliyo, ka dibna sida loo soo sheego oo wax looga beddelo iyada oo lagu saleynayo (sida qoraalkan oo kale!).
Shayga kale ee xiisaha lihi waa "Akhrinta Maalinlaha ah". Waxaan u maleynayey hubaal in kuwani ay dhexda ka noqon doonaan wadada, laakiin dhab ahaantii aad ayey u sarreeyaan. Dadku waxay xiiseeyaan waxa aan aqrinayo oo aan kula talinayo iyaga! Taasi waxay dareemeysaa wax fiican. Maalin kasta waxaan ka aqriyaa boqolaal quudin iyo bogag ah waxaanan isku dayaa inaan dib ula noqdo sheekooyin gaar ah oo dadku jeclaan lahaayeen. Marar badan, kuwani waa xiriiriyeyaal baloogyo kale oo aan xiisaynayo oo aan doonayo inaan u gudbiyo. Waxay umuuqataa isu soo dhawaanshaha ku lug leh arintan midaa bixinaysa!
Halkaas ayaad ku haysaa! Sannad qiimihiisu yahay xogta akhriska! Waxaan runtii jeclaan lahaa inaan aad uga fududeeyo falanqeyntan marka xigta. Runtii waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo otomatiga qaybaha aniga Analytics warbixinnada si aan isha ugu hayo iyaga.
Immisa xumaan ah ayaa goobaha ay ka badiyaan tirada booqdayaasha?
Jun 7, 2007 saacadu markay ahayd 5:40 AM
Waxa aan ka helo xiisaha ku saabsan lambarka 'Daily Reads' waa aniga marar dhif ah, haddii aan waligay, akhriyo liistada liistada xiriiriyaha. Laakiin waxaan had iyo jeer arkaa aniga oo iskaankaaga iska baaraya.
Waxaan u maleynayay inay tahay sababtoo ah waxaan leenahay dano isku mid ah, waana laga yaabaa inay sidaas noqoto. Laakiin waxay umuuqataa inay kudhacday akhristayaal kale oo badan sidoo kale.
Waxaan ka helay waxyaabo aad u wanaagsan Akhriskaaga Maalinlaha ah. Waxaa laga yaabaa inaad kaliya haysato xariif aad ku shaandheyn karto qashinka annaga us
Jun 7, 2007 saacadu markay ahayd 6:57 AM
Taasi waa hubaal waxa aan ka daba joogo taas, Tony. Marar aad u yar ayaan doortaa xiriir ka baxsan mawduuca mawduucgeyga… runtiina waan akhriyaa maqaalladaas oo waan jeclahay iyaga ka hor inta aanan dhajin!
Waxaan ka helayaa iyaga oo ka soo jeeda meelo [qosol badan] oo aad u tiro badan, oo ay ku jiraan digniinta Mashiinka Raadinta, baloogyada, bogagga calaamadaha bulshada, iwm.